I-Spooky eDry Ice Fog i-Jack Jack-o-Lantern
I-Spooky Halloween i-Jack-o-Lantern
I-Ice Fry Yomileyo kwi-Halloween Jack-o-Lantern
Unokwenza ubhujane obukhuphayo buphuma e-Halloween jack-o-lantern usebenzisa icebo elincinci elomileyo. Nantsi indlela oyenza ngayo kunye nenkohliso yokufumana impembelelo engcono.
Iimpahla ze- Jack-o-Lantern Spooky
indebe ende okanye iglasi
Kulungile, okokuqala kufuneka unqande ujikeleze phezulu kweengqungqelo ukuze ukwazi ukukrazula imbewu kunye nezinye iinjenge. Ukuba ukhawuleza ixesha, unganqumla lesi sinyathelo, kodwa kulula ukuguqula ithanga elicocekileyo.
Gweba ubuso okanye uyilo kwiimpu. Gcinani engqondweni, i-carbon dioxide fog idiza, i-fog iya kuphuma emlonyeni wakho we-jack-o-lantern kunokuba ukhangele amehlo. Ukuba ukwenza umlomo ube mncinci, ngokuqhelekileyo unokufumana ukukhupha ukuphuma kumpumlo kunye namehlo kakuhle.
Xa ulungele ukuboniswa, misela isitya esinde esipheleleyo samanzi ngaphakathi kwe-jack-o-lantern. Zama ukufumana i-can okanye iglasi ephakamileyo kuneyona ye-jack-o-lantern, kuba oko kukukhohlisa ukuqhuma ukukhupha kuyo yonke imifanekiso.
Ukulahla iqhekeza leqhwa elomileyo emanzini. Faka endaweni ephezulu yamathanga. Ufuna ukuba isiqhekeza simelane ngokuqinileyo ukuze kungabikho mimoya yomoya edibanisa inkungu.
Unokongeza i-ice eomileyo ngaphezu kwexesha.
Biography kaHans Bethe
6 Iimvavanyo zabaFundeli zifuna ukuphumelela kwiiKlasi zeZifundo zeNtlalo
Ulungelelwaniso lweC Kitchen
Amazwi aseJamani eLuthando noRomance